ကိုasokaရဲ့software ပေါင်းချုပ် — MYSTERY ZILLION
မူလ › Sharing
August 2009 edited September 2009 in Sharing
MZ ကအစ်ကို တို့အစ်မတို့ရေ....
ကျွန်တော် အခုန ဒီ forum ထဲ မှာ avira premium security suite crack တွေ့လိုဒေါင်းပြီး
သုံးကြည့်တာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ အခု အဲဒီ software က ရက် ၃၀ ဘဲ ရမယ်ဖြစ်နေလို့
တချက်လောက်ကူညီပါအုံး။ ကျွန်တော် ဘယ် forum လည်းဆိုတာ မသိတော့ဘူး။ ဒီမှာဘဲတင်ပေးလိုက်မယ်။ ကူညီပါအုံး ။ အဲဒီ crack ဖိုင်ဖွင့်တော့ ဒီလိုပေါ်နေတယ်။ crack ဖိုင်အဆင်ပြေရင် မျှပါအုံးလို့....:77::77::77:
"with the new license file the program would no longer licensed. The file will not be installed." လို့ပေါ်နေတယ်။
** ကျွန်တော်ဒီမှာ ဓါတ်ပုံကို မထည့်တက်လို့....:2::2::2:
August 2009 edited August 2009 Registered Users
ကျွန်တော်ဖိုင်လေးတစ်ခု မျှ လိုက်ပါတယ်။ အောက်ဒေါင်းလိုက်ပါ။ သူကတော့ ဘယ်ဖိုင်ကို မဆို copy လုပ်တဲ့ဟာလေးပါ။ ဖိုင် ဆိုဒ်အရမ်းကြီးလည်း မြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သုံးတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။သုံးကြည့်ပါ......:D:D:D:D:D
အဆင်မပြေရင် ပြောပါ။ အဆင်ပြေရင်တော့.... thanks လေးကိုတော့..:68::68:
August 2009 edited August 2009 Moderators
asoka wrote: »
အဆင်ပြေရင် Thank ပေးမယ်လေ.......မပြေရင်တော့ ၀င်းဒိုးလာတင်ပေးရမှာနော် :P:D
princeakarit wrote: »
စိတ်ချပါ။ window ကို မထိစေရဘူး။ ရဲရဲ ကြီးကို အာမခံပါတယ်။ သူက right click box ထဲမှာ ၀င်နေလိမ့်မယ်။ .....:)
ကျွန်တော်ဆီမှာ email tracker pro လေးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာ တင်လို့ရလားမသိဘူး။ နည်းနည်းအကြံညဏ်ပေးပါ။ ရတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် upload လုပ်ပေးပါမယ်။
လေ့လာရုံသက်သက် ဆိုရင်တော့......ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။:D:P
Moe Zatt Ko
အဆင်မပြေရင် ပြောပါ။ အဆင်ပြေရင်တော့.... thanks လေးကိုတော့..
ကြိုthanks ထားမယ်နော် .. အခုတော့ မသုံးသေးဘူး .. နောက်မှသုံးကြည့်ဦးမယ် ... ဒါနဲဘယ်ဟာတွေစမ်းကူးပြီးပြီလဲ .. copy protect ပါတဲ့ဖိုင်တွေရောကူးပြီးပြီလား..
ကဲ..တင်စေဗျာ ..တင်စေ(Admin လေသံဖြင့်):D .. စမ်းကြည့်ရတာပေါ့
Moe Zatt Ko wrote: »
အဲ.............အဲဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမစမ်းရသေးဘူး ။ စမ်းနေတုံးဘဲ ဗျို့.....:p
မိုက်တယ်ဗျ ကျွန်တော်က black window သုံးတာဆိုတော့ သူမှာ builtin ပါလာတာဗျ စမ်းကြည့်ကြ
ကျွန်တော် ကဘယ်ဟာလဲလို့သွားကြည့်လိုက်တာ လက်ဆတ်သတ်တော့ tera ကိုးဗျ မကောင်းမှလဲနေရာ
ဒေါင်းသွားပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် = ပိုမြန်တယ်မမြန်ဘူးက ဘယ်လိုသိရမလဲဟင်
ဒေါင်း သွားတယ် နော်
ကဲ ဗျာ...တင်လိုက်ပြီ။ ကောင်းမကောင်း၊ ရ မရ စမ်းပြီးလည်းပြောအုံးနော်....:D
ကို မိုးဇက်တာ၀န်ယူရမယ်နော်....:D။ အစ်ကို တင်ဆိုလို့ ကျွန်တော်တင်လိုက်တာ:P:P
ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့....Thanks :68::68:
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ASOKA ရေ..
MZ က သူငယ်ချင်းတို့ရေ....
ကျွန်တော် ဖိုင်လေးတစ်ခု မျှလိုက်ပါတယ်။ Spy-Net တဲ့။ အောက်လင့်မှာ ဒေါင်းပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်ဖာသာစမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်လည်းစမ်းနေတုံးပါ။ :P
သတိ။ antivirus ကို ပိတ်ထားပါ။ သူက spy ဆိုတော့ antivirus ကအော်နေအုံးမယ်နော်...:D
Password လေးကတော့..... (Spy-Net)
ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့....:D:D Thanks လေ...:68:
How to Install : Download and install Sun's version of Java. Or visit Sun's download Java page for more options and instructions.
How to Update : Visit Windows Update (or Start / Windows Update), press the "Scan for Updates" button, and then install the "Security Update Microsoft Virtual Machine (Microsoft VM)" critical update. If not available, install Sun's Java (above).
Zarni aung wrote: »
ဘယ်လိုမရတာလဲ။ ဒေါင်းလို့မရတာလား။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် install လုပ်လို့မရတာလား။
သေချာလေးပြောပါ။ ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ ရတယ်။အစ်ကို...။ ကျွန်တော်ထင်တာ java လိုတယ်ထင်တယ်။ သေချာလေးလုပ်ကြည့်ပါ။:)
September 2009 edited September 2009 Moderators
ကျွန်တော်တို့ copy ကူးကြတဲ့အခါ virus file ပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကူးမရ ရွှေ့မရတဲ့ file တွေ့နဲ့တွေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် "ဒုန်" ဆိုတဲ့အသံထွက်လာရင် အရမ်းစိတ်ညစ်ရတယ်ဗျာ။ file error တတ်လဲ ဆက်ကူးတဲ့ non stop copy software တွေရှိပေမယ့် စက်တိုင်းမှာ မရှိနိုင်ပြန်တော့ အဆင်မပြေပြန်ဘူးလေ။
ဒါကြောင့် window က ပါတဲ့ xcopy utility တစ်ခုကို သုံးကြည့်ကြရအောင်။ command prompt ကနေသုံးရပါ့မယ်။
ကျွန်တော့ CD Drive က F: ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်က CD ခွေထဲကနေ hard disk (D:) ထဲကိုကူးမယ်။ ဒီတော့
အရင်ဆုံး ထဲမှာ aquartz ဆိုတဲ့ folder လေးအရင်ဆောက်လိုက်တယ်
> Run box ကနေ cmd လို့ ရိုက်ပြီး Ms DOS cmmand pormpt ထဲကို ၀င်လိုက်ပြီ၊
>> F: ဆိုပြီး enter နှိပ်လိုက်တယ် ပြီးတော့
> xcopy /c /s *.* \_aquartz (ကြားထဲမှာ space တွေပါတယ်နော်) လို့ ရိုက် enter နှိပ်ပြီး ကော်ဖီသောက်ရင်း ကြည့်နေလိုက်တယ်လေ အေးဆေးပဲ
ဒီနေရာမှာ xcopy command လေး အကြောင်းနဲနဲ(သိသလောက်) ရှင်းပြပါရစေ
xcopy /s /c *.* \_aquartz ကျွန်တော်သုံးလိုက်တာက
xcopy က အဓိက commnad, /s *.* ကတော့ CD ထဲကရှိသမျှ file တွေနဲ့ subfolder တွေအားလုံးကူးမယ်
/c ကတော့ error တတ်လည်း ဆက်ကူးပါ ပေါ့
နောက်ဆုံး \_aquartz ဆိုတာကတော့ paste လုပ်မဲ့ destination ပေါ့ဗျာ
အသေးစိတ်သိချင်သူများအတွက် Xcopy ပုံစံကတော့ ဒီလိုပါ (as type XCOPY /? in command prompt)
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
source Specifies the file(s) to copy.
destination Specifies the location and/or name of new files.
/A Copies only files with the archive attribute set, doesn't change the attribute.
/M Copies only files with the archive attribute set, turns off the archive attribute.
/D:m-d-y Copies files changed on or after the specified date. If no date is given, copies only those files whose source time is newer than the destination time.
/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]... Specifiesalist of files containing strings. Each string should be inaseparate line in the files. When any of the strings match any part of the absolute path of the file to be copied, that file will be excluded from being copied. For example, specifyingastring like \_obj\_ or .obj will exclude all files underneath the directory obj or all files with the .obj extension respectively.
/P Prompts you before creating each destination file.
/S Copies directories and subdirectories except empty ones.
/E Copies directories and subdirectories, including empty ones. Same as /S /E. May be used to modify /T.
/V Verifies each new file.
/W Prompts you to pressakey before copying.
/C Continues copying even if errors occur.
/I If destination does not exist and copying more than one file, assumes that destination must beadirectory.
/Q Does not display file names while copying.
/F Displays full source and destination file names while copying.
/L Displays files that would be copied.
/G Allows the copying of encrypted files to destination that does not support encryption.
/H Copies hidden and system files also.
/R Overwrites read-only files.
/T Creates directory structure, but does not copy files. Does not include empty directories or subdirectories. /T /E includes empty directories and subdirectories.
/U Copies only files that already exist in destination.
/K Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attributes.
/N Copies using the generated short names.
/O Copies file ownership and ACL information.
/X Copies file audit settings (implies /O).
/Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an existing destination file.
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an existing destination file.
/Z Copies networked files in restartable mode.
The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable. This may be overridden with /-Y on the command line.
အားလုံးပဲ ကော်ပီကူးရင်း ကော်ဖီဇိမ်နဲ့သောက်နိုင်ကြပါစေ :6::P:6:
ဝါသနာပါသူများ စမ်းသပ်ကြည့်ရန်အတွက်ပါ ၊ knowledge အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးတာပါ။ မသင့်တော်ဟု ယူဆပါက ဖျက်ပြစ်နိူင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တော့ မစမ်းရသေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆို Avira ကြီးက အော်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့်..:D:D
Source - Internet
နာမည်ကိုက digital keylogger ပါလား.. မိုက်ပါ့...
ဆွဲမရတော ့ဖူး..ဟင့် :2::2::2::2:
ပြန်တင်ပေးပါ ပြန်တင်ပေးပါ ..အဟင် ့
September 2009 edited September 2009 Administrators
Link Error ဖြစ်နေတယ် Bro.
ဆွဲလို့ရဘူးဗျ ... (:((
ကျနော် ဆွဲတာ ရတယ်ဗျ .. အဲလင့်ကနေပဲ .. ဘာလို့လဲသိဘူးနော် :d
အဲရာလေးက ကောင်ကောင်လေးဆိုတော့ ဆာဗာကလည်း ဗြင်းလိုက်တယ်ထင်တယ်။
ကောင်ကောင်လေးဆိုရင်တော့ ဇူးဇူးကိုပဲပေးလိုက် ...
ဒို့ကတော့ ... ဒို့ဂဒေါ့ ... ကောင်မလေးပဲ လိုချင်ဒါ ... :d
Multiupload ကနေ ကြိုက်တဲ့ Hosting ကနေဆွဲနိုင်ပါတယ် ..
ဘရားသားတို့ရေ အနော်တော့ရတယ်ဗျ.. anit-virus ကိုdisable လုပ်ပြီးဒေါင်းတယ်.. ဇစ်ဖြည်တော့လည်း disable လုပ်ပြီးဖြည်မှရတယ်ဗျ...
Ifile မှာလည်း ထပ်တင်ပေးထားပါသေးတယ်..
အဆင်မပြေရင် .. Download Tool တွေကိုမသုံးဘဲ .. Browser ကို Proxy နဲ့ တစ်ချက်၀င်ပြီး ဆွဲရင်ရပါလိမ့်မယ်..
Alexander wrote: »
ကိုကြီးအလက်ဇန်းဒါးကို ခေါ်ချင်ရင် သုံးတဲ ့နည်း ပါခင်ဗျာ ့။
မထွက်သတ်မယ်ဆိုရင်တော ့....မထွက်ဖူးလား...အဲဒီလို အခြေအနေမျိုမှား ဒီလို ခေါ်ကြည် ့ပါ။
ဟာ ...keylogger တဲ ့ဟေ ့ဆိုရင်ဖြင့်
ဟင်းဟင်း..တန်းပြီးခုန်ပေါက်ထွက်လာတာတော ့တာပဲ ခင်ဗျ။:P:P:P
မယုံရင်စမ်းကြည် ့ပါ :D:D
နောက်တာနော်...ချစ်လို ့စတာပါ..ဆိုးနဲ ့နော်..ဟီး :D:D
ကျွန်တော် ပြန်စမ်းတော့ ရတယ်။ connection ကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခု နောက် လင့်ကနေပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။
အဆင်ပြေပါစေဗျာ...ကျွန်တော်က ifile နဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပြီးတင်လိုက်တာ....
မယုံရင်စမ်းကြည် ့ပါ :d:d:d
နောက်တာနော်...ချစ်လို ့စတာပါ..ဆိုးနဲ ့နော်..ဟီး :d:d:d
လူဇိုးဒွေ .... :9:
ခေါ်၀ူး .... :d
သိပ်မှန်ပါတယ်။ :D ကို Alexander ရေ...အဲဒီလောက် တောင်ဖြစ်နေပြီ လား။ စိတ်ထိန်းအုံးလေ...
ဇာနည် နင်ပြောတာ သိပ်မှန်နေသလားလို ့
ကိုအက်လန်ဇန်းဒါး စိတ်ချိုးနဲ ့နော်...စတာ ဟီး။။
ငါတော့ ဒုက္ခပဲ ...
ကျနော်က Website Browsing & Download ကို trace လိုက်ဖို့ ... Keylogger ကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုချင်တယ်။ အဲဒါကို ... ခုထိ ကျနော့်မှာ ကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးလေ။
ရပြန်တော့လဲ ... Trial Version တွေချည့်ပဲ ...
အဲလိုနဲ့ပဲ ... Project တွေပြီးလို့ FRC သိမ်းသွားရင်တောင် ကျနော် အဆင်ပြေပါ့မလားမသိဘူး .... ):))
အဲလိုမဖြစ်စေချင်ရင်တော့ ... Keylogger ကောင်းကောင်းတစ်ခု Key or Crack အပါအ၀င် ကျနော့်ဆီသာပို့လိုက်ကြပါတော့လို့ ...........
Keylogger ကတော့ ဒေါင်း လို့ ရသွားပြီ.. သုံးတော့မယ်လုပ်မှ မသုံးတက်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်. အဲဒါ ဘယ်လိုသုံးရလဲ ပြောပြပေးကြအုံးနော.်.. အရင် တခါ တုန်းက Keylogger လေးတုန်းက..သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်.. သုံးတက်တယ်..အခု ဟာ ကျတော့သုံးတက်တော့ဘူး.....
ကျွန်တော် software လေးတစ်ခု မျှလိုက်ပါတယ်။ MZ ပရိသတ် တွေသိပြီး သား ဆိုရင် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီဟာလေးက password viewer ဆိုပေမယ့် ကျန်ခဲ့တဲ့ password ဘဲ ကြည့်လို့ရတာပါ။
နောက်ထပ် ကောင်းတာလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် အားရင် မျှလိုက်ပါမယ်။
အဆင်ပြေရင်တော့... thanks လေးတော့...:68::68:
Down လို့မရဘူး။ Page Load error ပဲဖြစ်နေတယ်ဗျ။
number13 wrote: »
ရပါတယ်။ ကျွန်တော်အခု ဘဲ စမ်းကြည့်တာအဆင်ပြေပါတယ်။ သေချာလေးပြန်စမ်းကြည့်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ က ifile.it ကအဆင်ပြေ လို့အဲဒါနဲ့တင်လိုက်တာပါ။
ဒေါင်းလို့လဲ ရတယ် ..စမ်းလို့လည်း ပြီးသွားပြီ.. အဆင်လည်း ပြေတယ်..နော်.. ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်.. နောက်ထပ် ရှိသေးတယ် ဆိုတာလေးတွေ လည်း ထပ်ပေးအုံးနော်....
မမြင်ရတဲ ့Password ကိုရော ကြည့်လို ့ရလားဟင်..
ကြည့်လို ့ရရင်တော ့ဟိဟိ
မရရင် .. mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်
ကျွန်တော် ဖိုင်လေးတစ်ခု မျှလိုက်ပါတယ်။ spy-net တဲ့။ အောက်လင့်မှာ ဒေါင်းပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်ဖာသာစမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်လည်းစမ်းနေတုံးပါ။
ဒေါင်းလို့တော့ရသွားပြီ..ကျေးဇူးပဲ..ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာတော့ သိသေးဘူး..စမ်းကြည့်တာ မရလို့.. သိရင် ပြန်ပြောပြအုံးနော်....
lwinf wrote: »
ငါ အစ်ကို ကတော့ နောက်နေပြီ။ မနောက်ရဘူးနော်...:68::68: